Hesekiel 1 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
1 Afe a ɛto so aduasa, ɔsram a ɛto so anan no da a ɛto so anum, bere a me ne nkurɔfo a wɔafa wɔn nnommum+ no wɔ Kebar+ asubɔnten ho no, ɔsoro buei+ na minyaa anisoadehu fii Onyankopɔn hɔ.+ 2 Ɔsram no da a ɛto so anum, bere a wɔfaa Ɔhene Yehoiakin+ dommum kɔe akyi afe a ɛto so anum no, 3 Yehowa de n’asɛm maa+ ɔsɔfo Busi ba Hesekiel+ tẽẽ wɔ Kaldeafo+ asase so wɔ Kebar asubɔnten ho; ɛhɔ na Yehowa nsa baa no so.+ 4 Na mehwɛe no, mihuu ahum kɛse+ bi a efi atifi fam ne omununkum+ kɛse ne ogya a edi ahim sɛ ɛreba.+ Ná ɛhɔ nyinaa ayɛ hann, na na biribi te sɛ sika ne dwetɛ mfrafrae wɔ ogya no mu.+ 5 Na mihuu honhom abɔde baanan+ wɔ mfinimfini. Na sɛnea wɔn su te ni: Wɔte sɛ ɔdesani. 6 Wɔn mu biara wɔ anim anan+ ne ntaban anan.+ 7 Wɔn anan a esisi fam no teɛ, na wɔn nan ase te sɛ nantwi ba nan ase,+ na ɛho hyerɛn te sɛ kɔbere a wɔatwiw ho.+ 8 Wɔwɔ ɔdesani nsa wɔ wɔn ntaban ase wɔ afã anan no nyinaa,+ na wɔn baanan no nyinaa wɔ anim ne ntaban.+ 9 Wɔn ntaban no toatoam. Na sɛ wɔrekɔ a, wɔnnan wɔn ho; wɔn nyinaa kɔ wɔn anim tẽẽ.+ 10 Sɛnea wɔn baanan no anim te ni: Wɔn nyinaa wɔ onipa+ anim, na wɔwɔ gyata+ anim wɔ nifa,+ na wɔsan wɔ nantwi+ anim wɔ benkum,+ na baanan no wɔ ɔkɔre anim nso.+ 11 Saa na na wɔn anim te. Na wɔn ntaban+ mu atrɛtrɛw hwɛ soro. Wɔn mu biara wɔ abien a akeka asi anim, na abien nso kata wɔn ho.+ 12 Na wɔn nyinaa kɔ wɔn anim tẽẽ.+ Baabiara a honhom no bɛkanyan wɔn sɛ wɔnkɔ no, na wɔkɔ.+ Na sɛ wɔrekɔ a, wɔnnan wɔn ho.+ 13 Honhom abɔde no te sɛ nnyansramma a ɛredɛw.+ Na biribi te sɛ agyatɛn+ di akɔneaba wɔ honhom abɔde no ntam; ogya no hyerɛn, na anyinam fi ogya no mu ba.+ 14 Na honhom abɔde no di akɔneaba te sɛ anyinam.+ 15 Bere a migu so rehwɛ honhom abɔde no, mihuu ntwahonan biako wɔ asase so wɔ honhom abɔde no mu biara nkyɛn,+ wɔn anim a ɛbɔ ho anan no ho.+ 16 Na sɛ wohwɛ ntwahonan+ no a, ɛhyerɛn te sɛ sikaberebo;+ na anan no nyinaa di nsɛ. Sɛnea ne hwɛbea te no, ɛreyɛ akɔyɛ sɛ ntwahonan a ɛhyɛ ntwahonan foforo mu.+ 17 Sɛ ebiara rekɔ a, ɛnam n’afã anan no so.+ Sɛ ɛrekɔ a, ɛnnan ne ho.+ 18 Na ne hankare no korɔn ma ɛyɛ hu, na aniwa wowɔ anan no nyinaa ho hyia.+ 19 Sɛ honhom abɔde no kɔ a, ntwahonan no di wɔn nkyɛnmu kɔ, na sɛ wɔma honhom abɔde no so fi asase so a, ntwahonan no nso ma ne ho so.+ 20 Baabiara a honhom no bɛkyerɛ sɛ ɛnkɔ no, na ɛkɔ; ɛkɔ nea honhom no kyerɛ sɛ ɛnkɔ. Na ntwahonan no momaa ne ho so wɔ wɔn nkyɛnmu, efisɛ na abɔde no honhom wɔ ntwahonan no mu. 21 Sɛ wɔkɔ a, na ɛno nso kɔ; sɛ wogyina a, na agyina; sɛ wɔma wɔn so fi asase so a, na ntwahonan no amoma ne ho so wɔ wɔn nkyɛnmu, efisɛ na abɔde no honhom wɔ ntwahonan no mu.+ 22 Ná biribi te sɛ bamma+ wɔ honhom abɔde no atifi a ɛpa yerɛwyerɛw te sɛ ahwehwɛbo* kokuroo a wɔatrɛw mu wɔ wɔn ti so.+ 23 Wɔn ntaban no teɛ na edi nhwɛanim wɔ bamma no ase. Wɔn mu biara wɔ ntaban abien a ɛkata ne fã ha, na abien nso kata ne fã ha. 24 Sɛ wɔnam a, mete sɛ wɔn ntaban no gyigye te sɛ nsu pii a ɛreworo,+ te sɛ ade nyinaa so Tumfoɔ no nnyigyei, te sɛ gyegyeegye kɛse bi,+ te sɛ asraafodɔm kɛse gyegyeegye.+ Sɛ wogyina a, wogyaagyaa wɔn ntaban mu. 25 Na ɛnne bi fi soro wɔ bamma a ɛwɔ wɔn so no so bae. (Sɛ wogyina a, wogyaagyaa wɔn ntaban mu.) 26 Ná biribi te sɛ hoabo+ wɔ soro wɔ bamma a ɛwɔ wɔn so no so, biribi a ɛsɛ ahengua.+ Na obi a ɔte sɛ ɔdesani te ade a ayɛ sɛ ahengua no so+ wɔ soro. 27 Mihuu biribi te sɛ sika ne dwetɛ mfrafrae gonn,+ na na biribi te sɛ ogya wɔ emu nyinaa,+ fi nea ɛte sɛ n’asen so kɔ soro; na efi nea ɛte sɛ n’asen so ba fam nso mihuu biribi te sɛ ogya, na na ne ho nyinaa ayɛ hyerɛnn. 28 Na mihuu biribi te sɛ nyankontɔn+ a ɛwɔ omununkum mu osutɔ da. Saa ara na na ade a ayɛ hɔ nyinaa hyerɛnn no te. Ná ɛte sɛ Yehowa anuonyam.+ Na bere a mihui no, mede m’anim butuw fam,+ na metee sɛ obi rekasa.
Nea ɛkyerɛ ankasa ne “asukɔtweaa.”